समाचारको विषयलाई लिएर मोडल स्मिता थापाद्धारा ऋषि धमला माथि हमला ! – YesKathmandu.com
समय समयमा केही न केही फण्डा मच्चाइरहने पत्रकार ऋषि धमलाको एउटा चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम छ ‘धमलाको हमला’ । टेलिभिजन सेटमा धमलाको हमला चलाउने पत्रकार ऋषि धमला अहिले एउटा समचारका कारण तनावमा छन ।
आफ्नो चरित्र हत्या गरेको भन्दै एक मोडल पत्रकार ऋषि धमलालाई ‘साइबर क्राईम’ अन्तर्गत मुद्दा हाल्ने तयारी गरेसँगै धमलाको निन्द्रा चैन गायव भएको हो ।
धमलाद्वारा सञ्चालित एक अनलाईन पत्रिकाले आफ्नो चरित्र हत्या गरेको मोडल स्मिता थापाकोे आरोप छ । ‘ऋषी धमलाले आफ्नो अनलाईनबाट न्युज हटाएर हुन्छ र ? त्यो त भाईरल भइसक्यो दुनियाँ अनलाईन न्युजमा,’ उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकि छिन्, ‘माफी माग्नुपर्छ यदि साँझसम्म गरेन भने म भोली साइबर क्राइमको केस हाल्दै छु, ऋषि धमलालाई ।’
ऋषि धमलाद्वारा सञ्चालित रिपोर्टस् नेपाल डटकम नामक अनलाईनमा ‘स्मिता भन्छिन्, ‘मलाई ह्विस्कि पिएर वाईल्ड सेक्स गर्न मन लाग्छ,’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो ।नायीका स्मिताले साइबर क्राइममा जाने धम्कि दिएपछि समाचार हटाइएको थियो ।